Plaaneetiin 'lakkuu ardii' Kepler-438b jedhamtu argamte - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Plaaneetiin ‘lakkuu ardii’ Kepler-438b jedhamtu argamte
Plaaneetiin ‘lakkuu ardii’ Kepler-438b jedhamtu argamte
Dhiphinni lafa qonnaa isin yaachisaa? Baay’inna ummata addunyaa kanaa lafti tuni dandeettee baadhachuufi horachuun isii isin dhiphisaa? Kana hundaaf waan deebii laatuu danda’u bira gayutti kalaayuu isaaniiti kan saayinsistoonni guyyaa halkan ijaafi teleskooppii isaanii gara samiitti akeekan kan mirkaneessan.
Teleskooppiin samii Kepler jedhamu plaaneetii ‘lakkuu ardii’ ta’uu hinoolle jedhan arguu danda’eera. Palaaneetiin ‘Kepler-438b’ jedhamtee moggaafamete waahedduun ardii teennaan [tan dhallli namaafi lubbu qabeeyyiin biroo irra jiraataniin] akka wolfakkaattuudha saayinsistoonni kan mirkaneessan. Kepler-438b plaaneetota hanga ammaa argaman huda irraa hedduu abdachiistuu, tarii gara funduraatti ilmi namaa irratti niqophata abdii jedhuun, ta’uu isiiti kan dubbaatme.
Oduun gammachiisaa kanatti wonti bishaan qabbanaayaa naqe jira, ammoo. Kepler-438b kan argamtu baay’ee ardii irraa, ‘lightyear’ 470, fagaattee argamuu isiiti. Plaaneetiin tuni ‘exoplanet’ dha. kana jechuun solar system keennaan alatti argamti. Fageenna isii irraa kan ka’e, ammattii xayyaarri samii kamuu nama baadhatee mitii ufii isaa lightyear 470 bira gayuu danda’u tokko hinjiru.
Kepler-438b solar system keennaan alatti ‘Lyra constellation’ keessatti kan argamtu. Ammas planeetiin haarofni kuni ardii teenna irra waaxiqoo guddaadha. qilleensaafi oo’iinsi isii bishaan akka dhangala’uuf mijaataadha. Dachiin isaas dhagaa ta’uu hinoolu jedhu qorattoonni. Oo’insa 40%n isa ardiin keenna aduu irraa argattu caalu Kepler urjii isii irraa argatti. Woggaan tokko, bifa nama raajuun, Kelper-438b irratti guyyaa 35 qofa.
Ammatti wonti lubbuu qabu kamuu Kepler-438b irratti argamuufi argamuu dhabuu isaaf wonti mirkanaaye tokko hinjiru. Kepler-438b irra dhalli namaa jiraachuu haalli isa dandeessisu jiraachuun isaa yoo mirkanaaye, haala ittiin gamasitti godaannu mijessuu ta’a jechuudha rakkoon ykn danqaan dhala namaa qormaatuuf deemu.
plaaneeti ardii fakkaattu
Previous articleDaa’imman Itoophiyaa guddifachaa sobaan gara Ameerikaatti geessaa kan ture yakka hojjachuu amane
Next article‘Sanduuqni Gurraachi’ AirAisa galaana Jaavaa keessaa baafame